समाचार - संसारमा सब भन्दा महँगो हीरा कुन हो? लिलामी ईतिहास बनाउने खजानाहरूमा हेर्नुहोस्
संसारमा सब भन्दा महँगो हीरा के हो? जब मान निर्धारण गर्न असम्भव छ, हामी लिलामीको इतिहासमा सब भन्दा महँगो र सबैभन्दा महँगो हीराको माध्यमबाट हीराको औठीको झलक देख्न सक्छौं। यी नीलामी को इतिहास मा एक ऐतिहासिक हीरा रिंग सिर्जना गरीयो। मुटु सुन्दर र मतवाला छ!
लिलामी घरको इतिहासमा पाँच सब भन्दा महँगो हीरा
१००.० c क्यारेट वजनको यो ग्रफ पहेंलो हीराको घण्टी कम बोलपत्रको कारण सुरुमा बन्द गर्न असक्षम भयो। पछि, सोथेबीको लिलामी घरले हीराको पुनः लिलामीको घोषणा गरेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना मे २०१ 2014 मा १$..3 मिलियन डलरको अन्तिम मूल्य हो। सोथेबीको अनुसार यस सम्झौताले खुलासा गर्यो कि उक्त मूल्यले यस अघिल्लो विश्व रेकर्ड १ broken लाई तोड्यो। मिलियन अमेरिकी डलर, र लिलामी घर विश्वास गर्दछ कि मूल्य "राम्रो" छ, यस पछि, हीराको अनुमानित मूल्य १-20-२०-२5 मिलियन अमेरिकी डलरको बीचमा।
२०१ 2017 को वसन्त हthक of कन्भेन्सन र प्रदर्शनी केन्द्रमा th औं साँझ आयोजित गरिएको थियो। अत्यधिक प्रत्याशित "गुलाबी तारा" -। ..60० क्यारेट वजनको इलिप्सको आकारको ईन्ट्री निर्दोष गुलाबी हीरा लगभग 55 553 मिलियन ह Hongक Kong डलरको लागि (सम्पादकको नोट: 90 million ० लाख आरएमबी रेन्मिन्बी लेनदेन, जसले हीराको लिलामीमा नयाँ रेकर्ड स्थापित गरेको छ) संसार
क्रिस्टीले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा १ 14..6२ क्यारेटको निलो हीरा $$..6 मिलियन डलरमा लिलामी गर्‍यो। अज्ञात खरीददार द्वारा लिइएको शानदार निलो हीरालाई ओपेनहीमर ब्लू भनिन्थ्यो। लिलामी अघि मूल्य 38 38०० अनुमान गरिएको थियो। ~ million मिलियन अमेरिकी डलर, नीलामीमा भाग लिनको लागि यस कोटीको सबैभन्दा ठूलो मणि हो।
नोभेम्बर १२, २०१ 2013 मा, विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन्तला हीरा similar१..59मिलियन अमेरिकी डलरमा बेचियो, त्यस्तै हीराको लिलामीको मूल्यको रेकर्ड राख्दै। यो सुन्तला हीरा अमेरिकी जियोमोलजिकल संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ताको ग्रेडको रूपमा मूल्या was्कन गरिएको थियो र यसको रंग शुद्ध सुन्तला हो। यस प्रकारको हीरालाई "फायर डायमंड" पनि भनिन्छ र यो नीलामीमा विरलै देखिन्छ। यो भनिन्छ कि यो सुन्तला हीरा यसको प्रकारको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ।
अक्टोबर २०१ 2013 मा, ११ Hong.२8 क्यारेट वजनको सेतो अण्डाकार फेंडर रंगको प्रकार आईआईए हीरा अन्ततः $ $.$ मिलियन (HK $ २१२ मिलियन) मा "ह Hongक Kong सोथेबीको भव्य आभूषण र जेड आभूषण लिलामी" मा बिक्री भयो। यो भनिन्छ कि यसले सेतो हीराको दुनियाको लागि लिलामी रेकर्ड सिर्जना गर्‍यो, र यो लिलामीको इतिहासमा सब भन्दा महँगो र भारी हीरा पनि भएको छ। यो ११8 क्यारेटको सेतो हीरा दक्षिण अफ्रिकामा २०११ मा खानी गरिएको हीरा कच्चा मालको २9c क्यारेटबाट मेशिन गरिएको थियो। यो हीराको खरिदकर्ताको पनि यसको नामकरण अधिकार हुन सक्छ भन्ने खबर छ।
आभूषण को इतिहास मा नौ गहना लिलामी
बडोदाको महारानीको हार, भारत
लिलामी समय: १ 197 44
यो गहनाको इतिहासमा सब भन्दा उल्लेखनीय सिर्जना हो भन्न कुनै अतिशयोक्ति छैन। १ pear4 क्यारेटको कुल वजनसहित तेह्रवटा नाजुक आकारको कोलम्बियाई पन्नाहरू कमलको आकारमा हीराको मध्य भागमा निलम्बित गरिएका छन्, र दर्जनौं पन्ना र हीराले बनेका छन्। । सब भन्दा अचम्मको कुरा के हो भने यी रत्नहरू सबै भडोदाको ग्रान्ड ड्यूकको मुकुटबाट लिइएको हो। बडोदाको महारानी, ​​भारतमा डचेस अफ विन्डसर भनेर चिनिन्छ, गहनाको लागि एक शौक छ। त्यहाँ व्यक्तिगत गहना संग्रह को केवल तीन सय टुक्रा छन्। ती मध्ये केही मुगल युगको पनि हुन्।
द डचेस अफ विन्डसरको ब्रोच
लिलामी समय: १ 198 77
भान क्लीफ र अर्पल्स, भारतको वरन्डामा लेडी अफ भर्गोको कस्टम-निर्मित जबकि, डर्चस अफ विन्डसरको गहनाको श्रृंखला अनुकूलित गर्न कार्टियरसँगै काम गर्थे। यसलाई २० औं शताब्दीको सब भन्दा बहुमूल्य गहना संग्रहको रूपमा पनि चिनिन्छ। डचेस अफ विन्डसरको मृत्यु पछि उनको संग्रह 50 करोड dollars० लाख डलर भन्दा बढी लिलामी गरियो। १ 40 .० मा कार्टियरले रातो, नीलो र हरियो रत्नहरू र सिट्रिन र हीरालाई यस भव्य फ्लेमिing्गो ब्रोचको लागि सजाए। राजा एडवर्ड आठौं उदारतापूर्वक आफ्नो प्रिय महिलालाई दिनुभयो। यद्यपि उनले डचेसको मृत्यु पछि ब्रोच हटाउने आशा गरे तर उनले कहिलेसम्म जिद्दी गरेन। र यो ब्रोचको मूल्य लगातार वृद्धि भएको छ, र यो अनुमानित million मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा times गुणा बढी छ!
राजकुमारी सलीमाह आगा खानको हार
लिलामी समय: २००
यो डचेस अफ विन्डसरको रत्न मात्र होइन जुन आकाश-उच्च मूल्यको लागि लिलामी गरियो। १ 69 C in मा जब सेली क्रोकर-पुल राजकुमारी बनिन्, उनले विलासी गहनाको एक श्रृंखला स .्कलन गर्छिन्। र यी गहनाहरु को १ were were in मा सम्बन्धविच्छेद पछि बाहिर लिलामी गरियो। नक्कलीहरुमा बोउचरनको हार, भ्यान क्लीफ र इबलको भारतीय श्रृंखलाको हार र हार्ट आकारको निलो हीरा पनि समावेश छ, ती सबै सुन्दर मूल्यमा बेचिन्छन्, जसले विन्डसरको डचेसको मूल्यहरु dwarfs। गहना लिलामी।
मारिया Callas को हार
मारिया Callas, आफ्नो "देवी" को लागी प्रसिद्ध, एक आकर्षक ओपेरा गायक हो। उनको कट्टर व्यक्तित्व र दुखद प्रेम कहानी सधैं व्यक्तिको छलफलको केन्द्रबिन्दु हुन्। उनी वास्तविक देवी हुन्, जहिले मोती र हीरा लगाउँछिन्, जहाँ जहाँ पनि उनीहरुको ध्यान आकर्षण गर्न जान्छन्। मारिया क्यालाको सबैभन्दा बहुमूल्य आभूषण स collection्ग्रहमा १ 67 bought67 मा किनेको गुलाबी हीराको ब्रोच समावेश छ जुन धेरै वर्ष अघि उनको मृत्यु पछि नोभेम्बर २०० 2004 मा लिलामी गरियो। कुल लिलामी गहन मूल्य १.8686 मिलियन अमेरिकी डलरमा पुग्यो।
लिलामी समय: २०० 2006
राजकुमारी मार्गरेटको गहना लिलाम कहिल्यै सजिलै बिर्सिनेछैन, विशेष गरी १ 190 ०१ मा रानी भिक्टोरियाको गहना लिलाम गरे पछि एक शताब्दी पछि। अवश्य पनि, राजकुमारी मार्गरेटले २०० 2006 मा royal०० शाही संग्रह पनि बजार पत्ता लगाएका थिए। राजकुमारी मार्गरेट आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघि जहिले पनि रमाइलो र आकर्षक भएको छ, शाही परिवारमा प्रवेश गर्ने सुअवसर पाउन धेरै गहनाहरू बढ्दैछन्। फेबर्गे र क्वीन मेरीका केही वारिसहरू, र १ 60 of० को शाही विवाहमा उनले लगाएको प्रसिद्ध पोल्टिमोर मुकुट सहित, यो १ सय 18० भन्दा अगाडि जन्मिएको थियो।
एलिजाबेथ टेलरको हीरा घण्टी
लिलामी समय: २०११
कुनै गहना लिलामी एलिजाबेथ टेलरको लाइनअप लक्जरीसँग मेल खाँदैन। उनको गहनाको संग्रह को लागी एक महिना को लागी दुनिया को यात्रा को लागी लिलामी गरीएको थियो। यदि हामीलाई लाग्छ कि 50 करोड अमेरिकी डलरको अघिल्लो बिक्री खराब हातहरू खिच्नको लागि एकदम राम्रो छ भने, त्यसो भए १ 137.२ मिलियन अमेरिकी डलर वर्णन गर्न के प्रयोग गर्ने भनेर थाहा छैन! लिलामी गहनाहरूमा १ 68 actor actor अभिनेता रिचर्ड बुर्टन (रिचर्ड बुर्टनले उनको हीराको घन्टी दिएका थिए, जम्मा 33 33.१ c क्यारेट्स। र यो यसको सानो अंश मात्र हो, साथै कार्टियर-डिजाइन मोती रूबी पेरेग्रीना नेकलेस, द माइक टोड ताज, ताज हीरा हार) , र अर्को बुल्गारी रातो पन्नाको हार रिचर्ड बुर्टनले उपहार दिए।
लिली सफ्राको ब्रोच
लिलामी समय: २०१२
वास्तवमा, लिली सफ्राको गहना लिलामी हालका वर्षहरूमा भएको थियो। उनको लिलामी ज्वेलहरु मा JAR पेरिस द्वारा बने माणिक र हीरा ब्रूचहरु, लगभग १33.० c क्यारेट वजन सम्मिलित छ। लिलामी प्रक्रियाको सबै भन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो हो कि आम्दानीको सबै दानमा चन्दा दिइन्छ, किनकि लिली सफ्रा एक प्रसिद्ध व्यक्ति मात्र होइन तर परोपकारी पनि हुन्। चार विवाह पछि, उनको गहना स collection्ग्रहको कुल सम्पत्ति १.२ मिलियन डलर थियो, जसले उनलाई विश्वको सबैभन्दा धनी मान्छे मध्ये एक बनायो।
जीना लोलोब्रिगिडा द्वारा कानमा झुम्का
लिलामी समय: २०१ 2013
जीना Lollobrigida एक इटालियाली अभिनेत्री मात्र हैन। उनी एक पत्रकार र मूर्तिकार पनि हुन्। उनी १ 50 .० र १ 60 s० को दशकमा सबैभन्दा प्रसिद्ध यूरोपीयन अभिनेता पनि थिइन। त्यस समयमा उनी केवल सेक्सी साइन थिइन। मे २०१ 2013 मा, उनको गहना संग्रह नीलामी भयो र सनसनीको कारण भयो, विशेष गरी पियरे बाउचरिन डायमंड पन्ना कान झुम्का जो १ 64 .64 मा उत्पादन गरिएको थियो।
Hèlène Rochas को कंगन
२०१ indeed वास्तवमै गहनाको लिलामको शिखर अवधि हो, र सबैभन्दा उल्लेखनीय मध्ये एक रोजाको गहना स collection्ग्रह हो, Nid d'Abeille रेने बोइविनको रातो, नीलमणि, र हीरा सहितको सबै सुनको ब्रेसलेट। एक अर्थमा, यसले सors्कलनकर्ता र पेरिस उच्च समाज बीचको दूरी पनि कम गर्‍यो र सानो अनुभवको अनुभव गर्‍यो।
पोष्ट समय: सेप्टेम्बर २०-२०१8